သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ဟုသင်ခေါ်ဆိုသည့်အရာ၊ - သတင်း
သင့်သူငယ်ချင်းများကိုသင်ပြောဆိုပုံကအရာအားလုံးကိုဖော်ပြသည် - သင်သွားခဲ့သောကျောင်းအမျိုးအစား၊ သင်မည်မျှပင်ရှုပ်ထွေးသည်၊ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများအပေါ်သင်မည်သို့ရှုမြင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ သင်ချစ်ပြီးနွေးပါသလား သို့မဟုတ်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာရုံ?
ဘယ်လိုပဲပြောပြောဟွန်တစ်ယောက်ယောက်ကိုဖုန်းခေါ်တဲ့အခါဒါကိုယုံကြည်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာပဲရှိတယ် (အမြဲတမ်းစာလုံးကြီးထားတယ်) ။ လူများအားလုံးကိုဟွန်ဟုခေါ်ခြင်းဖြင့်သင့်အတွက်မည်မျှယုတ်ညံ့သည်ကိုသတိပေးရန်သင်ရွေးချယ်သည်။ သင်အသက် ၂၈ နှစ်မှာ Botox ရပြီးသင်အသက် ၃၅ နှစ်ရောက်ရင်သင့်ရဲ့ဒုတိယနှာခေါင်းအလုပ်မှာနေရမယ့်သူအမျိုးအစားပါပဲ။
အကယ်၍ သင်သည် အကယ်၍ သင်သည် ၄ ​​ရာစုမှ ၅ ရာစုအတွင်းဥရောပကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည့်တိုက်ပွဲဝင်အာရှသားခြေသလုံးအုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဘယ်ကိစ္စမှာဟွန်းကောင်းနေ
ဒီစကားလုံးကိုသုံးနေတုန်းပဲ ၁၀ နှစ်သားအရွယ်မှာကော်ကိုခိုးယူတဲ့အားကစားပွဲအလုပ်ရုံကနေပိတ်ပင်ခံရတဲ့သူတွေပါ။ Dude ဆိုတာအင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတစ်ခုလုံးမှာအနည်းဆုံးသောစကားလုံးပါ။ ဒါဟာ uncoolness စိတ်ပျက်ဖွယ်, outsized အတိုင်းအတာရှိပါတယ်ပါတယ်။
၎င်းကိုအသုံးပြုသူများသည်စိတ်ကူးတစ်ခုရချင်ကြသည် - တစ်ခုခုကိုချည်နှောင်။ ပြန်လည်ချထားသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကကယ်လီဖိုးနီးယားမှာမဟုတ်ဘူး။ Castleford မှာရွှံ့ထူသောလယ်ထဲရောက်နေတယ်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း paintball marshall တစ်ယောက်လိုလုပ်နေတယ်၊ ​​မမျှော်လင့်ဘဲစိတ်မ ၀ င်စားတဲ့ ၁၃ နှစ်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုအတွက် Hopper ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်။ မင်းက
ငါ့ကို fuck ဆိုတဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကို PAL ခေါ်တဲ့အချိန်မှာမင်းဟာဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ ၎င်းကိုအောက်ရှိအသုံးပြုမှုတိုင်းသည်သုတ်လိမ်း။ ဆူညံနေသောလောက၌စိတ်ပျက်စရာများ၊ မုန်းတီးမှုနှင့်မုန်းတီးမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကမ္ဘာကြီးဖြစ်သည်။
တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းဆီကပိုက်ဆံလိုချင်ရင် Pal ထွက်လာတယ်။ သငျသညျအနည်းငယ်ရှည်လျားလွန်းဘို့အခြမ်းအပေါ်ညစ်ပတ်ဟင်းလျာများကျန်ရစ်ပါတယ်တဲ့အခါမှာ Pal ထွက်လာပါတယ်။ ဒါဟာထိုးဖောက်သို့မဟုတ်လာကြတယ်သို့မဟုတ်အသနားခံ, အားလုံးမလှုပ်မရှားနှင့်လျှပ်စစ်ပြင်းထန်သောကဲ့သို့ကောင်းစွာရုံကအသံရဲ့, ခက် P ကို။ တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းကိုအမြဲတမ်းမင်းကိုခေါ်နေရင်မင်းကိုသတ်ဖို့လျှို့ဝှက်ထားချင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။
သင်၏အခန်းဖော်ဟောင်းများအားလုံးသည်သင့်ကိုမခံရပ်နိုင်သောကြောင့်နောက်ခန်းများ၌ပြန်လည်နေထိုင်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုခဲ့သည့်တတိယနှစ်တွင်သင်ကဲ့သို့တစ်စုံတစ်ယောက်၏သူငယ်ချင်းကိုခေါ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်တရာမှရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်သောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်ဖော်ရွေသောအသံဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏လည်ပင်းကိုပြင်းထန်စွာရှူရှိုက်မိခြင်းနှင့်တူသည်။
အနည်းငယ် passive- ရန်လိုအမြဲတမ်းကျက်သရေနဲ့တူအလုပ်လုပ်တယ်။ သင်အမှန်တကယ်သင်၏စစ်မှန်သောအိမ်ထောင်ဖက်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုခေါ်ဘယ်တော့မှချင်ပါတယ်။ သငျသညျမိမိညဥ့်သွားပုံကိုတွန်းအားပေးမှာ, သင်၏သောက်ဖိတ်သူတစ် ဦး သည်သင်မေးခွန်းများကိုထဲကတစ်ခုပြီးတာနဲ့တစ်ချိန်ကဒီ Uber ကားမောင်းသောသူသည်အဘို့သိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
သငျသညျသူငယ်, ကောင်းစွာကောင်းစွာနှင့်အမှန်တကယ်မိတျဆှေဇုန်ခွဲထား, မိတ်ဆွေ -Zoned ခဲ့ကြရတယ်။ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုသင့်အားသူတို့ဆိုင်ထဲမှရေခဲမုန့်ကိုသွားရန်၎င်းနာကျင်စေသည့်ဤစကားစုဖြင့်သင့်အားတောင်းဆိုမှုများကိုအကြိမ်တိုင်းလုံလောက်စေသည်။ သငျသညျကျော Sainsbury ရဲ့ထံမှ Phish အစားအစာ၏ 500ml စည်ပိုင်းသယ်ဆောင်နေစဉ်တဖန်ပို။ ပင်နာကျင်။
ကလေးဘ ၀ ကမင်းရဲ့ဖိနပ်ကိုတင်လိုက်ပါ
tinder အပေါ်ပထမ ဦး ဆုံးသတင်းစကားကိုဘယ်လို
Pints ​​။ ဘောလ်တစ်လုံး။ သင်ကပိုင့်တွေအားလုံးကိုသောက်ခဲ့တယ် သငျသညျ Skipton ကနေမဟုတ်လျှင်အစဉ်အဆက်ကသင်၏တင်းကျပ်စွာ - စည်းထားသောလူကလေး - စက်ဝိုင်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏ဤအပြင်ဘက်တွင်ပြောအန္တာရာယ်ကြဘူး, တခြားသင် Emma Watson ရဲ့ရည်းစားဟောင်းနှင့်အတူအပြုအမူနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအတွက်တက်အဆုံးသတ်ပေလိမ့်မည်။
Alpha-Kappa-Sigma ကသူတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုကိုပြန်လည်လိုချင်ကြသည် သငျသညျနောက်ပြန် ဦး ထုပ်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် kegstand လုပ်နေတာမဟုတ်လျှင်, သင်အစဉ်အဆက်မည်သူမဆိုသင့်ရဲ့ bro ကိုခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Broseph နှင့်သက်ဆိုင်သည့် synonyms အားလုံးကိုအကျယ်ချဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်သာမန် buddy ရဲရုပ်ရှင်သို့မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုပြန်ပို့ရန်ဖြစ်သည်။
Bros အမြဲလက်မောင်းတစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူရိုက်ယူရ
သင်ဘယ်သူတွေလဲ Dick Van Dyke? နောက်ကျော 1800 မှပယ် fuck ဆိုတဲ့နှင့်သင်နှင့်အတူသင့်ပင်ဂွင်းငှက်များယူပါ။
၅၈ နှစ်အရွယ် Cockney တက္ကစီမောင်းသမားသည်သင့်ကိုချဉ်းကပ်လာသည်။ ကောင်းပြီ darlin '? သူကပြောပါတယ် မိုင် ၃၀ အချင်းဝက်အတွင်းတွင်ခံစားရနိုင်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ Granny Bee မဟုတ်လျှင်, Darling ငါ့ကိုမခေါ်ပါ။
Eton ၏နောက်ဆုံးနာမည်ဖြစ်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ချယ်လ်ဆီးပိုင်နက် Made သို့ခြေလှမ်းအနည်းငယ်လှမ်းသွားသည်။ သာနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အိမ်ခု၏ဝဲနှင့်အတူကပြောသည်, ကများသောအားဖြင့်လုံခြုံသောစကားလုံးနှင့်ဘိုလီးဗီးယားတစ်ဝှမ်းသင်၏ခရီးတစ်ထောင်ပုံပြင်များအကြားတည်ရှိနေပါတယ်။
ကောင်းပါပြီ၊ သင်သည်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ခုသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်၊ ထိုအကြောင်းကိုလူတိုင်းကိုအမြဲတမ်းသတိပေးရန်မလိုအပ်ပါ။ နေရာတိုင်း၌သင်၏ blazer ကိုဝတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်လူများကို Jenkin နှင့် Dugmore ဟုရည်ညွှန်းပြီးသင်က faux-Bullingdon wannabe အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးသမားများအကြောင်းပြောသောအခါလိပ်စာပုံစံတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံနိုင်သည် (အမှန်တကယ်သူတို့ကိုဝိန်းနှင့်ဒီယိုဟုခေါ်သည်)၊ အကယ်၍ သင်အလေးအနက်ထားလိုပါကသင်၏သူငယ်ချင်းများကိုသင်၏ပထမအမည်ဖြင့်ခေါ်ပါ
သငျသညျဇာတ်ဆောင် 1920, ဂျက်ဇ်ဂီတအဆိုတော်ကဲ့သို့မြည်ရန်ကြိုးစားနေပေမယ့်သင်ပိုမို ventriloquist အမှတ်စဉ်လူသတ်သမားကဲ့သို့အချို့သောဖြတ်ပြီးလာမယ့်။ အမျိုးသမီးအရုပ်ကိုခေါ်သောသူများမှာမိန်းမများနှင့်စကားပြောဆိုသင့်သည့်အချိန်တွင်အရုပ်များနှင့်ကစားခြင်းကိုတစ်သက်လုံးကစားခဲ့ကြသောယောက်ျားများဖြစ်သည်။
ငါ့အဘောင်းဘီတိုများနှင့်ဂျယ်လီပင်များကို 90 နှင့် 90 အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးမှစားပါ။ မည်သူ့ကိုမျှမခေါ်ပါနှင့်။ အဆင်မပြေသောလူကြီး၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ပိတ်မိနေသည့် crusty ဆယ်ကျော်သက်ကဲ့သို့အသံမထွက်ဘဲမည်သူ့ကိုမျှမခေါ်နိုင်ပါ။ ထို့နောက်သင်သည်အရာများကို rad ခေါ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနိမိတ်လက္ခဏာများကိုလွှင့်ပစ်လိမ့်မည်။
fella လို့ပြောတဲ့သူတွေကတော့ Facebook မှတ်ချက်ပေးပြီးတဲ့နောက်အနမ်းတွေပေးတဲ့လူတွေပါ။ fella ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏တည်ရှိမှု၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာထင်ရှားသည့်အချက်မှာလူနှင့်လူနာများအားပြောပြသည့်အရာသည်သင်နှင့်ကစားသမားများသည်မသန့်ရှင်းသောအရောင်အသွေးစုံသည့် Ralph Lauren polos ကိုကောက်ယူရန်နှင့်ပြောင်မြောက်သော nandos ကိုရပ်ရန်အပတ်စဉ်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ fellas ၏မနာလိုဖြစ်မနေပါနဲ့
သင်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ် PAL ကိုအလွန်အကျွံသုံးပြီးအနီးဆုံးရွေးစရာအတွက်ဝယ်ယူသည့်အခါများအတွက်တရားဝင်တောက်ပသောညီမျှသည်။ အများပြည်သူကျောင်းသူတစ် ဦး အရိပ်အမြွက်ဒီမှာ၌ရှိခိုး, condescension နှင့်အတူရောနှောရှိပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်သည့်နေရာ၌ညအိပ်ရပ်နားရန်၊ စပျစ်သီးပြွတ် Adidas ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဝတ်ပြီးသင်၏အိမ်ထောင်ဖက်များအားလုံးကိုစစ်ထုတ်ပေးသည့်အရာများဖြစ်သည်။ သင်တို့မူကားအဲဒီမှာဘယ်တော့မှပါပဲ။ သင်သည်သင်၏စုပေါင်းရင်းနှီးမှုအတွက်ရွေးရန်ကမ်းလှမ်းသူဖြစ်ပြီးသင်ရောင်းသူနှင့်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောသူ၏အိပ်မက်ကိုမက်သည်။ သူ၏ဖောက်သည်များကိုခြိမ်းခြောက်သည်။
သငျသညျပဲသင်၏ခရီးမှပြန်ရောက်သို့မဟုတ်သင်များလွန်း Angry Boys ၏ဖြစ်စဉ်များကိုကြည့်ပါတယ်။ ဘယ်ဟာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်ဟာသြစတြေးလျဒါမှမဟုတ်တောင်အာဖရိကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်၊ ဗြိတိသျှနဲ့တူတူပဲ၊ ငါဟာတရုတ်လူမျိုးကိုကြင်ကြင်နာနာအော်ပြောနေတာနဲ့တူတယ်။ apples'n'pears အဟောင်းကိုသွားကြည့်ရအောင်။
ငါသည်သင်တို့ကိုငါဖန်စီကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး, ငါကပိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖန်စီကြောင်းပါပဲ။ ဆိုလိုတာကလာကြည့်ပါ ဦး ။ ငါမင်းကိုသိတဲ့အကြောင်းမင်းသိပေမယ့်မင်းရဲ့အစ်ကိုကြီးလိုငါပြုမယ်၊ ငါ WhatsApp 10 မိန်းကလေးတွေတစ်ချိန်တည်းမှာလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ဖက်လိုက်မယ်။
ဟုတ်တယ်ငါအမေနဲ့နီးနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အဘယ်သူမျှမငါမလုံခြုံဘူး။ ငါလတ်ဆတ်တဲ့ငါနှင့်အတူရပြီမိန်းကလေးမည်မျှသင်ပြောပြခဲ့သလား
Aw'ight သူဌေး၊ ညဥ့်နက်မှာအလုပ်ရှုပ်နေတယ်၊ ​​Uber ထဲကိုတစ်ဖက်မှာ iPhone တစ်လုံးနဲ့တစ်ဖက်က tinnie တစ်လုံးထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ငါနင့်ကိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။
သူသော်လည်းသူသည်သင်၏သူဌေးမဟုတ်ပါဘူး? တကယ်တော့ဒါဟာတကယ်တော့အခြားတစ်ဖက်လှည့်: သင်သူ့ကိုပေးဆောင်ပါတယ်, သင်အာဏာရှိသည်, သင်သူဌေးပါပဲ။ ဒီတော့ဘာကြောင့် fuck ဆိုတဲ့ကိုမင်းတက္ကစီဒရိုင်ဘာကိုသူဌေးလို့ခေါ်ရတာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ fuck ဆိုတဲ့မင်းကိုမင်းပြောတာလဲ။
နက်နက်နဲနဲနက်နက်နဲနဲသိရတာကမင်းဟာသူရဲဘောကြောင်သူတစ်ယောက်၊ မင်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေအပေါ်မှာအဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းနဲ့အုပ်စိုးခြင်းဆိုတဲ့အတွေးကမင်းကိုရွံရှာစေပြီးတူညီတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစေလို့ပဲ။ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း, သင်ကဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်ကောင်း invert အဖြစ်မှန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်း bossman အတွက်လူတိုင်းကိုခေါ်ရန်ဆုံးဖြတ်။